अर्थ – Samaweshi Nepal.com
आश्विन ५, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्तिमा असहजता आएको भन्दै कोटा तय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई पेट्रोलियम पदार्थका बिक्री गर्दा मोटरसाईकल, स्कुटरलाई बढीमा ५ लिटर र अन्य हल्का.. पूरा पढ्नुहोस् »
जय यादव, वीरगंज, ३, भदौ । वीरगंज क्लेजले आज देखि व्यक्तिव बिकास तथा प्रभावकारी बोल्ने शैलीका लागि तालिम सुरु गरेको छ । होटल भिस्वामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सो तालिम सुरुवात गरिएको वीरगंज क्लेजका अध्यक्ष.. पूरा पढ्नुहोस् »
१ असार, जनकपुरधाम । प्रदेश २ ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा.. पूरा पढ्नुहोस् »
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको अनुमानित आय व्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनको संयुक्त.. पूरा पढ्नुहोस् »
श्रोत : _ kantipur डा. खिमलाल देवकोटा काठमाडौँ १९ फागुन : — राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्ने संविधानको मूल भावना कार्यान्वयनमा आएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव भएको पनि अब झन्डै.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं ५ फागुन : - चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा व्यापार घाटा १४.८ प्रतिशतले बढेर रु चार खर्ब ९३ अर्ब ४२ करोड पुगेको छ । आव २०७३/७४ मा सोही अवधिमा व्यापार घाटा चार खर्ब २९ अर्ब ८७ करोड रहेको थियो । गत आवको.. पूरा पढ्नुहोस् »
काठमाडौं पुस ३ , नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूलय फेरि बढाएको छ । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढेको भन्दै बुधबार पेट्रोल, डिजेल र मटि्टतेलमा मूल्यवृद्धि गरेको हो । निगमकाअनुसार पेट्रोलमा १.. पूरा पढ्नुहोस् »
नुवाकोट : रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेशका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको मल्टिइन्ट्री भिसा अन्योलमा परेको छ । नेपाल र चीनबीच भिसा प्रक्रिया विवादका कारण १८ महिनादेखि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । भिसाका लागि.. पूरा पढ्नुहोस् »
मंसिर २१, २०७४(सरकारले एक सातादेखि बजार अनुगमन स्थगित गरेको छ । निर्वाचनको मुखमा आर्थिक चलखेल बढे पनि बजार अनुगमन तीव्र बनाउनुको सट्टा स्थगित गरेको हो । बजार अनुगमन गरेर मूल्य हस्तक्षेप गर्ने अधिकार आपूर्ति.. पूरा पढ्नुहोस् »
चुनावमा ‘गाडधन’: उम्मेदवारले दिनकै ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म खर्च
आक्रामक रूपले तडकभडक र तामझामसाथ भइरहेको खर्चका तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम झिकिएको भने पाइएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको वीरगन्जस्थित अञ्चल कार्यालयले चुनावका समयमा पनि बैंकहरूबाट बढी रकम.. पूरा पढ्नुहोस् »